Odisha Tour Packages - ဇိမ်ခံကား Tours မှ India- Tour အော်ပရေတာ Bhubaneswar - 91-993.702.7574
အိန္ဒိယရိုးရှင်းစွာရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အံ့သြဖွယ်သောနေရာများနှင့်အတူ brimming နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အများဆုံးမယုံနိုင်စရာနေရာများအကြားဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနီးနိုင်ငံ၏အရှေ့ဘက်တွင် Odisha ဖြစ်ပါတယ်။ စွန့်စားခရီးသွားဧည့်သည်, Odisha - 2011 သည်အထိ Orissa အဖြစ်လူသိများ - တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် Safari, ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဘာ့ဂ်နှင့်လှပသောသမိုင်းဘုရားကျောင်းအပါအဝင်လှုပ်ရှားမှုများတစ်ခုဖြားယောင်းရောစပ်ကမ်းလှမ်း, Odisha သင့်ရဲ့ခရီးသွားပုံးစာရင်းထဲတွင်ဖြစ်ရှိပြီး, သင်တို့သည်ငါတို့၏ Odisha Tour Packages နှင့်အတူသင်၏နောက်အားလပ်ရက်စာအုပ်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။
အနောက်ဘင်္ဂလီပြည်နယ်၏တောင်ဘက်မှတည်ရှိသော Odisha, ရှည်ခြင်းနှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်သမိုင်းအဖြစ်ကြွယ်ဝခြင်းနှင့်တက်ကြွခေတ်သစ်ယဉ်ကျေးမှုရှိပါတယ်။ ဒါဟာတာရှည်နှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ် backstory နှင့်အတူနေရာတစ်နေရာဖြစ်ပါသည်, သေးယနေ့လျှင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးဆဲသောတက်ကြွခြင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် destination သည်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကရေတွင်းထောင်နှစ်ကျော်အသက်အနှစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုသမိုင်းစာအုပ်များတွင်ဖော်ပြထားသည်။ Odisha Tour Packages သင်ရှားပါးသောအရပ်နှင့်အရှားပါးဆုံးစူးစမ်းကူညီပေးသည်
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း, Odisha ခရီးသွားလုပ်ငန်း ပို. ပို. ဧည့်သည်များအတွက်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကျေးလက်ရှုခင်းများကနေစည်ကားမြို့ကြီးများမှ, ယင်းဒေသ၏မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်မြင်ကွင်းထဲမှာစိမ်ဖို့ရောက်လာအဖြစ်ပိုပြီးလူကြိုက်များဖြစ်လာသည်။
ယနေ့ဧည့်သည်များ Odisha ရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်သမိုင်းအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူနိုင်မည့်အများအပြားမယုံနိုင်စရာမြင်ကွင်းများရှိပါတယ်။ ဒေသတွင်း၌အလွန်အသက်အကြီးဆုံးမြင်ကွင်းများ၏အချို့ထက်ပိုမို 20,000 နှစ်ရှိပြီဖြစ်ထင်ထားတဲ့ Gudahandi ၏ရော့ခ်ပန်းချီကား, ပါဝင်သည်။ ဤအလိုဏ်ဂူအတွင်းလမ်းလျှောက်ဖို့အမှန်တကယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အများဆုံးဝေးကွာသောဘိုးဘေးများ၏ခြေရာကိုနင်း၌ကျင်လည်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Odisha Tour Packages သင်တစ်သက်တာများအတွက်အတွေ့အကြုံရှိသည်ကြောင်းအာမခံပါသည်။
ဆိုက်လူသားထု၏အသက်အကြီးဆုံးဇစ်မြစ်တချို့၏သက်သေအထောက်အထားများဖြစ်ပြီး, Odisha မှခရီးသွားဧည့်အမှန်တကယ်ဒေသတွင်းရင်ခွင်ကြောင်းသမိုင်း၏နှစ်ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာများအတွက်ခံစားရဖို့ဖြစ်သကဲ့သို့သူတို့ကိုသွားရောက်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားအမယုံနိုင်စရာသမိုင်းဝင်က်ဘ်ဆိုက်များအတန်ငယ်ပိုပြီးမကြာသေးမီပေမယ့်မနည်းအထင်ကြီးနေကြသည် - ထိုသို့သော၎င်း၏ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဗိသုကာများအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကျော်ကြားသည့်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် Konark Sun ကဘုရားကျောင်းအဖြစ်။ ဗိမာန်တော်၏အချို့အစိတ်အပိုင်းများကိုအပျက်အယွင်းအတွက်ယခုပေမယ့် 13th ရာစု inthe built, အလှဆုံးနှင့်အရှုပျထှေးသောအမွေးများနှင့်ဒေသများအများအပြားနေဆဲထိန်းသိမ်းထားကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Odisha Tour Packages အားဖြင့်သင်တို့ကိုအလှရဲ့စစ်မှန်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖွင့်သိရပါလိမ့်မယ်။
ထို program နှုန်းအဖြစ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး။
အားလုံးသေဆုံးသူ, ယာဉ်ရပ်နား & ကားမောင်းသူရဲ့စရိတ်။
02-03 ပုဂ္ဂိုလ်များ Dzire, 04 Persons Etios ။
06 Persons Innova ။
08-10 Persons Tempo ကို Traveller ။
Two-နေ့လည်စာ, ညစာ & နံနက်စာနှင့်အတူအခြေခံမျှဝေခြင်းအပေါ် Swish တဲအတွက် Bhitarkanika အမျိုးသားဥယျာဉ်မှာနှစ်ဦးညဥ့်မဟုတ်သည့် AC အနေရာထိုင်ခင်း။
နေ့လည်စာ, ညစာ & နံနက်စာ - နှစ်ဦးနှင့်အတူ Similipal Jungle Resort ကိုမှာနှစ်ဦးညဥ့်မဟုတ်သည့် AC အနေရာထိုင်ခင်း။
Bhitarkanika အမျိုးသားဥယျာဉ်မှာ Boating ။
မဟုတ်သည့် AC အ Bolero အားဖြင့် Similipal အမျိုးသားဥယျာဉ် 01day အပြည့်အဝတောတွင်း Safari ဥယျာဉ်ကိုလည်းမှာ။
Jungle Safari ကအဘို့သင့်ကိုလမ်းပြ။
အမျိုးသားဥယျာဉ်မှအိန္ဒိယများအတွက် entry အခကြေးငွေ။
Air ကိုခ / ရထားခရှိလျှင်။
ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ၏နေ့စွဲ၏ 60 ရက်ပေါင်းမတိုင်မီဖျက်သိမ်းခြင်း - စုစုပေါင်းကြိုတင်ဘွတ်ကင်နေထိုင်ကာလ၏ကုန်ကျစရိတ်၏ 25%
30 စုစုပေါင်းကြိုတင်ဘွတ်ကင်နေထိုင်ကာလ၏ကုန်ကျစရိတ်၏% - ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ၏နေ့စွဲ၏ 60-40 ရက်ပေါင်းမတိုင်မီဖျက်သိမ်းခြင်း
21 စုစုပေါင်းကြိုတင်ဘွတ်ကင်နေထိုင်ကာလ၏ကုန်ကျစရိတ်၏% - ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ၏နေ့စွဲ၏ 30-50 ရက်ပေါင်းမတိုင်မီဖျက်သိမ်းခြင်း
07 စုစုပေါင်းကြိုတင်ဘွတ်ကင်နေထိုင်ကာလ၏ကုန်ကျစရိတ်၏% - ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ၏နေ့စွဲ၏ 21-75 ရက်ပေါင်းမတိုင်မီဖျက်သိမ်းခြင်း
ကြိုတင်ဆိုက်ရောက်၏ယနေ့အထိ 07 ရက်အတွင်းဖျက်သိမ်း - စုစုပေါင်းကြိုတင်ဘွတ်ကင်နေထိုင်ကာလ၏ကုန်ကျစရိတ်၏ 100%
Check-out ပြရန်နှင့်မျှမတို့ကြိုတင်ထွက်ခွာ၏စီစဉ်ထားသည့်ရက်စွဲမှ - စုစုပေါင်းကြိုတင်ဘွတ်ကင်နေထိုင်ကာလ၏ကုန်ကျစရိတ်၏ 100% တရားစွဲဆိုခံရကြလိမ့်မည်
ပွဲတော်ကာလအတွင်းတရားဝင်မဟုတ် (Durga puja ကာလ, နယူးတစ်နှစ် & Chistmass ကာလ, အမျိုးသားအားလပ်ရက်, RathaYatra ကာလ, သန့်ရှင်းသောကာလ)
"Odisha Tour package" ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ပထမဦးဆုံးဖြစ် ပြန်ကြားချက် Cancel
Bhubaneswar Puri 1 ည /2နေ့ရက်များ
နေ့ရက်များ၏အဘယ်သူမျှမ:2နေ့ရက်များ / 1 ည